अष्ट्रेलियामा कतै तपाईलाई यस्तो समस्या त परिरहेको छैन ?
संजिव पाण्डे-लेखक रजिष्टर्ड माइग्रेशन एजेन्ट
म नेपालबाट भर्खरै सिड्नी आइपुगेको छु । मेरो पढाइ मार्चबाट सुरु हुँदैछ । म पढ्न आएको कोर्स महँगो भएकोले अलि सस्तो कलेजमा पढौँ कि भन्ने सोच्दैछु । मार्चभन्दा पहिले नै कलेज परिवर्तन गर्न मैले के गर्नुपर्छ ?
तपाईं के कोर्स गर्न आउनुभएको प्रष्टसँग उल्लेख गर्नुभएको रहेनछ । यदि तपाईं प्याकेज कोर्स (जस्तै डिप्लोमा र त्यसपछि ब्याचलर्स) गर्न आउनुभएको हो भने मुख्य कोर्स (माथिको उदाहरणमा प्रमुख कोर्स भनेको ब्याचलर्स हो) ६ महिना पढेपछि तपाईं कलेज परिवर्तन गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । यदि प्याकेज कोर्स होइन भने पनि पढ्न आएको प्रमुख कोर्स ६ महिना पढेपछि कलेज परिवर्तन गर्न पाउनुहुन्छ ।
यदि ६ महिनाभन्दा पहिले नै कलेज परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो शैक्षिक संस्थाबाट रिलिज लेटर लिनुपर्दछ । कुनै गतिलो कारण नभइकन तपाईंको कलेज वा युनिभर्सिटीले तपाईंलाई रिलिज लेटर दिँदैन ।
बिना रिलिज लेटर तपाईंलाई अर्को शैक्षिक संस्थाले भर्ना गर्न मिल्दैन । केही नेपाली विद्यार्थीले रिलिज लेटर पाउनकै लागि नक्कली कागजात कलेजमा बुझाएको र कलेजले सो कुरा पत्ता लगाएर उनीहरूको भिषा क्यान्सल गराउनका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको भन्ने खबर केही अगाडि आएको थियो । नक्कली र कीर्ते कागजात बनाउनु अष्ट्रेलियाको कानुनअनुसार दण्डनीय अपराध हो । रिलिज लेटर सजिलै निकालिदिन्छु वा बिना रिलिज लेटर नै सस्तो कलेजमा भर्ना गरिदिन्छु भन्ने आश्वासन कसैले दिन्छ भने त्यस्ता व्यक्ति वा कन्सल्टेन्सीसँग अलि होसियार रहनुहोला ।
यस स्तम्भमा दिइएका जानकारी पूर्ण, अद्यावधिक र सबैका लागि उपयुक्त नहुनसक्छन्। कुनै निष्कर्षमा पुग्नु वा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुभन्दा पहिले अध्यागमन विभागको वेबसाइट, माइग्रेशनसम्बन्धी परामर्श दिने वकील वा रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेन्टबाट आवश्यक जानकारी लिनु उचित हुन्छ ।